Ahoana ny fomba hampiasana ny sivana vaovao sandoka ao amin'ny Microsoft Edge | Androidsis
Nandritra ny fifidianana 2016 tany Etazonia, betsaka ny voalaza momba ny vaovao diso izay navoaka tao amin'ity tambajotra sosialy ity mba hiezahana mitaona ny safidin'ny olona ho an'i Donald Trump, izay fantatsika rehetra, nandresy tamin'ny fifidianana. Nanjary loharanom-baovao tsy mety ritra ny Facebook, olana iray ezahany horesahina nefa toa mbola tsy fantany ny fomba na tsy tena kasainy hatao.
Iza raha toa mahalala ny formule tokony hatao dia Microsoft. Microsoft dia namoaka fanavaozana ny fitetezana azy ho an'ny finday, izay ampahafantariny ny mpampiasa amin'ny fotoana rehetra raha ny loharanon'ny vaovao vakianao dia voasokajy ho ambany lazaRaha atao teny hafa, ny ankamaroan'ny vaovao avoakany, raha tsy izy rehetra, dia diso.
Noho ny fielezan'ny vaovao sandoka mahazatra dia nisy fanombohana kely antsoina hoe NewsGuard noforonina fotoana vitsy lasa izay, izay nifanarahan'i Microsoft ampidiro ao amin'ny tranokala finday ny serivisinao. NewsGuard dia miady amin'ny vaovao sandoka amin'ny fanasokajiana azy ao amin'ny bara adiresy.
Raha asehon'ny bara adiresy ho antsika ny ampinga maitso, ny pejin-tranonkala izay vakianao manana tantara amin'ny famoahana vaovao marina, raha toa ka mampiseho ampinga mena antsika ny bara adiresy, midika izany fa afaka mamaky am-pahatoniana ireo hadalana rehetra navoakan'izy ireo izahay saingy tsy maintsy fantatsika fa voasokajy ho loharanom-baovao diso ity tranonkala ity.
Raha mila fantaro ny angona izay nahatonga ity orinasa ity hanasokajiana ity tranonkala ity ho diso, mila tsindrio fotsiny io takelaka antso io isika.
Ahoana ny fomba hampiasana ny NewsGuard ao amin'ny Microsoft Edge ary hiarovan-tena amin'ny vaovao tsy marina
Raha atao default dia tsy mandeha ity safidy ity. Raha te hampandeha azy isika dia mila mandeha any amin'ireo safidy fanamboarana fotsiny.
Manaraka, tsindrio eo Fanasokajiana ny vaovao.
Ao anatin'ny fanasokajiana ny vaovao dia ahitantsika ny serivisy NewsGuard, serivisy hampiatoana azy io, mila mamindra ny switch fotsiny isika aorian'ny Asehoy ny fanasokajiana ao amin'ny bara adiresy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fomba hampiasana ny sivana vaovao sandoka ao amin'ny Microsoft Edge
Nokia dia manamarina hetsika iray alohan'ny MWC 2019: ny Nokia 9, 6.2 ary 8.1 Plus miandry